Zavamaniry manadio ny rivotra: karazana tsara indrindra | Green Renewable
Portillo Alemanina | 13/04/2022 12:00 | Trano maintso
Miharatsy ny rivotra ao an-tokantranonay sy any am-piasana. Ny fomba fiainantsika no nahatonga ny fitomboan'ny vokatra vita amin'ny simika ao an-tokantranontsika izay mamoaka ny fifantohana amin'ny kapoaky ny organika miovaova izay manimba ny fahasalamana. Ny tena matetika dia: formaldehyde, trichlorethylene, benzene, xylene, toluene, gazy karbonika ary amoniaka, ny sasany amin'izy ireo dia misy fiantraikany carcinogenic voaporofo. Mba hiatrehana io toe-javatra io dia misy ny hafa zavamaniry manadio ny rivotra.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao hoe iza no tena zava-maniry manadio ny rivotra sy ny fomba mety hahasoa anao.
1 Tombontsoa azo avy amin'ny zavamaniry manadio ny rivotra
2 zavamaniry manadio ny rivotra
2.3 lelan'ny tigra
2.6 ficus matanjaka
2.7 hazo rofia sinoa
2.8 Vatan'i Brezila
2.9 Anglisy ivy
3 Hazo palmie
Tombontsoa azo avy amin'ny zavamaniry manadio ny rivotra
Manana tombony maro ny zavamaniry ao an-trano. Ho fanampin'ny miasa toy ny mpanadio rivotra voajanahary amin'ny toe-javatra sasany, izy ireo ihany koa mampihena ny tabataba izy ireo, manatsara ny toe-po ary manadio ny tontolo iainana. Tsarovy fa mandritra ny photosynthesis, ny zavamaniry dia maka gazy karbonika avy amin'ny tontolo iainana ary manova azy ho oksizenina, izay ilaina amin'ny fofon'ny olombelona.
Ny sasany amin'izy ireo dia mahasoa kokoa noho ny hafa amin'ny fanadiovana ny tontolo iainana sy ny fanivanana ny loto. Nanao fanadihadiana ara-tsiansa ny NASA tamin'ny faramparan'ireo taona 1980, ny NASA Clean Air Study, mba hamaritana hoe iza amin'ireo no nahomby indrindra tamin'io lafiny io. Nanao izany ireo mpikaroka lisitry ny zavamaniry fanadiovana 20 izay tena ilaina amin'ny fanadiovana ny rivotra amin'ny toerana mihidy.
Bill Wolverton dia mpahay siansa amerikana manampahaizana manokana momba ny simia, mikrobiolojia, biochemistry ary injeniera momba ny tontolo iainana. Nanapa-kevitra izy fa ny dimy amin'ireo zavamaniry ireo no tsara indrindra amin'ny fahazoana sy ny fahombiazany. Ny lisitra nohazavain'i Wolverton tamin'ny haino aman-jery samihafa dia mbola manan-kery sy mahaliana, ireo zavamaniry ireo dia afaka manala ireo akora manimba amin'ny rivotra toy ny formaldehyde, benzene, chili, carbon monoxide na trichloroethyl.
Izy io dia iray amin'ireo zavamaniry manadio indrindra ary iray amin'ireo mora karakaraina. Ny fametrahana an'io zavamaniry io ao an-tranontsika dia mampihena ny kapoaky ny organika mivadibadika toy ny formaldehyde, xylene ary toluene, izay dia manimba ny fahasalamana, ary mahomby ihany koa amin'ny fanesorana acetone, trichlorethylene ary benzene.
Teratany any amin'ny ala tropikaly any Amerika Afovoany sy Atsimo, mila toerana misy hazavana ankolaka izy, ary na dia tia ny hamandoana aza izy, dia zara raha tondraka, ary ny efitra fandroana misy hazavana voajanahary dia toerana tsara ho an'ity zavamaniry ity.
Iray amin'ireo orinasa fanadiovana rivotra tsara indrindra amin'ny ankapobeny. Fantatra amin'ny fampiasana anatiny. Ity hazo palmie ity dia mora hita amin'ny haingon-trano Victoriana sy amin'ny sarimihetsika vanim-potoana. Ny antony dia satria miaina amim-pifaliana ao an-trano tsy mila tara-masoandro mivantana. Fanampin'izany, tsy dia ilaina loatra ny fikarakarana mba hitazonana azy amin'ny toe-javatra tsara. Ity hazo rofia ity dia teratany eto Madagasikara. SAINGY ankehitriny dia manerana izao tontolo izao izany. Las Palmas dia manam-pahaizana manokana amin'ny fanesorana formaldehyde, benzene ary monoxide karbonika (indrindra raha misy olona mifoka sigara ao an-tranonao).
Ampiasaina izy io mba hitroka oksizenina sy formaldehyde. Io no iray amin'ireo zavamaniry trano mahatohitra indrindra misy. Fantatra amin'ny hoe tsy azo rava. Izy io dia nahatohitra ny tontolo mafana sy maina ao amin'ny efitrano iray, ny jiro manjavozavo, ny tsy firaharahiana ny rano, ny taona tsy misy famerenana indray, ny bibikely sy ny aretina, na inona na inona.
Izy io no mora indrindra amin'ny fikojakojana. Manana ravina volamena miendrika fo izy io ary malaza any Amerika Avaratra. Zavamaniry mafy izy io afaka miaina amin'ny hafanana ambany sy mangatsiaka kokoa, ka mahatonga azy ho tonga lafatra ho an'ny birao sy trano satria mamoaka monoxide karbônina sy formaldehyde eny amin'ny rivotra. Tena mafy izy io ary mitombo haingana. Ao an-trano dia aleony hazavana ankolaka mamirapiratra sy tany mando. Tonga lafatra amin'ny efitra fandroana na lakozia.
Manafoana ny monoxide karbônina sy ny poizina sy ny loto hafa. Izy io dia iray amin'ireo zavamaniry telo ambony indrindra amin'ny fanesorana formaldehyde amin'ny rivotra. Mora ny mikarakara sy ny mari-pana mety, manondraka ary hazavana, ny zavamaniry dia ho velona mandritra ny taona maro.
Mandefitra tsara ny hazavana ambany sy ny hatsiaka. Mahazaka hain-tany izy ireo ary tsy ho faty raha manadino manondraka satria mitahiry rano ao amin’ny fakany.
Karazana maitso maitso avy amin'ny karazana Ficus teratany any avaratra atsinanan'i India (Assam), atsimon'i Indonezia (Sumatera sy Java). Nampidirina tany Eoropa izy io tamin'ny 1815 ho toy ny zavamaniry an-trano. Iray amin'ireo mora karakaraina. Ny fametrahana an'io zavamaniry io ao an-tranontsika dia mampihena ny formaldehyde, fitambarana organika miovaova izay manimba ny fahasalamana.
hazo rofia sinoa
Raphis excelsa dia rofia vita amin'ny vilany kanto izay mora karakaraina ary tsy mila hazavana be. Raphis excelsa, antsoina koa hoe ahitra fanjaitra volamena sinoa, Manana karazany am-polony izy io ary mahatratra iray metatra sy sasany ny haavony. Mampihena ny formaldehyde sy benzene, kapoka organika mivadibadika manimba ny fahasalamana.
Dracaena no anarany siantifika ary anisan'ny fianakaviana agave izy io. Avy any Amerika tropikaly izy io ary kirihitra maitso maitso. Izy io dia miavaka amin'ny tahony volontsôkôlà maivana misy peratra marindrano. Ny raviny dia mihantona, miendrika lefona, ary miavaka noho ny lokony maitso mavana sy ny tsipika mavo mamakivaky azy.
Ireo voninkazo ireo dia tsy mitsimoka afa-tsy amin'ny santionan'ny olon-dehibe izay mahatratra haavo iray (matetika roa metatra) ary miavaka amin'ny hanitra mampitony. Mazàna mamelana matetika izy io ary mampihena ny fitambarana organika mivadibadika toy ny trichlorethylene sy xylene, izay manimba ny fahasalamana.
Izy io dia zavamaniry mitaingina mahazatra izay afaka miakatra metatra maromaro ambonin'ny tany ary afaka mihanika saika amin'ny karazan-tany rehetra, toy ny hazo, vato, rindrina. Ny fanangonana ny ravina sy ny taho dia azo atao amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona, na dia tsara kokoa ny manao izany alohan`ny voninkazo. Mampihena ny kapoka organika mivadibadika manimba ny fahasalamana, toy ny formaldehyde, trichlorethylene ary benzene. Ity voaloboka ity dia sarotra kokoa ny maniry, tia ny hatsiaka sy ny hamandoana, ary azo tehirizina ao anaty vilany eo amin'ny lavarangana.
Miasa toy ny humidifier voajanahary. Zavamaniry teratany any Chine izy io ary nambolena eran-tany. Amin'izao fotoana izao dia azo ampiasaina ho ampahany amin'ny haingon-trano, zaridaina ary patio. Noho ny toetra mampiavaka azy dia zavamaniry mila fikojakojana kely izy io.
Manala benzene, formaldehyde ary trichlorethylene. Ity zavamaniry an-trano tena malaza ity dia miroborobo amin'ny toetry ny hazavana maivana ary tsy mila rano be, ka tonga lafatra ho an'ireo izay manadino matetika ny manondraka ny zavamaniry.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny zavamaniry manadio ny rivotra sy ny tombony azo avy aminy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Trano maintso » zavamaniry manadio ny rivotra